ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित, अब के होला ? – Gandaki Voice
Home/विश्व/ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित, अब के होला ?
ट्रम्पमाथि अघिल्लो हप्ता (६ जनवरी) मा आफ्ना समर्थकलाई क्यापिटल हिल अर्थात् अमेरिकी संसद् परिसरमा हमला गर्नका लागि उक्साएको भन्ने आरोप थियो जसलाई सदनमा २३२ भोटले पारित गरिएको थियो । १० रिपब्लिन सांसदले महाभियोग प्रस्तावको समर्थन गरे । ६ जनवरीमा भएको हिंसामा एक प्रहरी अधिकारीसमेत पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो ।
सिनेटमा ट्रायलको क्रममा यदि दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित हुन्छ भने उनी तत्काल आफ्नो पदबाट हट्नुपर्ने हुन्छ । उनलाई अब कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालयमा अयोग्य ठहर गरिदिने सम्भावना रहेको छ ।
तर ट्रम्पको कार्यकाल यसैपनि २० जनवरीमा पूरा हुँदैछ र यति कम समयमा सिनेटमा उनीविरुद्ध ट्रायल पूरा हुन सम्भव छैन । सिनेटमा रिपब्लिकन नेता मिच मेक्कानेलले यो हप्ता पनि सिनेटको बैठक हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिको कार्यालय छोड्ने अघि अन्तिम निर्णय हुन नसक्ने बताएका छन् ।
रिपब्लिकन पार्टीका १० सांसदले महाभियोग प्रस्तावको पक्षमाा भोट गरेका छन । लिज चेनी, एडम किनजिंगर, जोन काटको, एन्थनी गोनजालेज, टम राइस, डेन न्यूहाउस, जेम हेरेरा ब्यूटलर, फ्रेड उपटन, डेभिड वालाडाओ, पिटर माइजरले उनीविरुद्ध भोट हालेका हुन् ।
रिपब्लिकन सांसद केविन म्याक्कार्थीले भने, ‘राष्ट्रपतिविरुद्ध यति कम समयमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु एक गल्ती हुनेछ । तर यसको अर्थ यो होइन कि राष्ट्रपतिले गल्ती गरेका छैनन् । बुधबार संसद भवनमा हमलाका लागि राष्ट्रपति जिम्मेवार छन् ।’ बहसका क्रममा ट्रम्पका बफादार मानिने ओहायोका सांसद जिम जोर्डनले डेमोक्रेट्समा दोहोरो मापदण्ड राखेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘रिपब्लिकन सधैं हिंसाको निन्दा गर्दछ, गत वर्ष भएको हिंसाको, अघिल्लो हप्ता भएको हिंसाका त जुनसुकै तरिकाले हामी गलत छौं । डेमोक्रेटले राष्ट्रपतिमाथि परीक्षण गर्न सक्छन् तर यक्त चुनावको अनुसन्धान गर्दैनन् जसका लागि आठ करोड अमेरिकी, रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सलाई शंका छ ।’ जोर्डनलाई हालै ट्रम्पले शीर्ष नागरिकको पुरस्कारबाट सम्मानित गरेका थिए ।
ट्रम्पलाई दोषी ठहर गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता हुनेछ, यसको अर्थ यो हो कि कम्तीमा १७ रिपब्लिककनले यसको पक्षमा भोट गर्नेछन् । न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार २० रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपतिलाई दोषी ठहर गर्नका लागि तयार छन् ।
ट्रायल आयोजित गर्ने कुनै समय सीमा छैन तर यस्तो लाग्छ कि २० जनवरी अघि यो समाप्त हुन सक्दैन जुन दिन जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको रुपमा शपथ दिलाइनेछ ।-बीबीसी